FLV Splitter: Sida loo Split FLV Files Fast (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > Video > FLV Splitter: Sida loo Split FLV Files Fast (Windows 10 ka mid ah)
Haddii aad la kulanto mid ama ka badan dhibaatooyinkan, aad ku sugan tahay meeshii saxda ahayd.
Oo dhererkeeda FLV video ka badan 15 daqiiqo sidaas aan la gelin karo in YouTube
Video FLV ayaa files aad u badan tahay. Waxaad u baahan tahay iyaga googooyaa.
Ma doonaysaa in aan kala tagno FLV file video galay dad badan oo FLV video files; waa ay fiican tahay in ay la tacaalaan dhammaan faylasha kale warbaahinta (sida super)
All aan doonayo inaan sameeyo waa hesho barnaamij fudud in ayi labada FLV video files galay 30 xabbadood labaad.
Splitter FLV in Wondershare Video Converter Ultimate (Windows 8 taageeray) kaa caawin kara inaad dhammayn dhammaan dhibaatooyinka kor ku xusan. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad kala files FLV galay qaybaha yar iyo si loogu badalo in ay faylasha gaar ah in kasta oo qaabab joogto ah. Haddaba FLV qalab splitter iyo kala FLV video galay qaybaha si degdeg ah oo aan khasaaro tayo leh.
Functions Main ee Video Converter Ultimate
Interface dareen in aan kala tagno files FLV
6 jeer ka dhakhsi la multi-Processor
No luma tayada video
Taageerada FLV qaybsama, MP4, wmv, MPEG, AVI, iyo qaabab loo jecel yahay oo dhan
All-in-mid video software: splitter FLV, joiner FLV, FLV Converter
Talaabooyinka Easy in Split FLV Files
Hadda hubi tallaabooyin fudud si ay u kala jabeen video FLV ah in qaybaha iyo dhoofinta ay u kala soocaan files fudud oo degdeg badan.
Talaabada 1: files FLV Load
Ka dib markii ay soo bixi Video Converter, dajiyo barnaamij iyo in la furi markaad dhamaysid. Waxaad arki doonaa daaqadaha aasaasiga ah sida hoos ku qoran. Guji "Add Files" button in ay doortaan files FLV aad rabto in aad ka, oo guji Open si ay u dar barnaamijka.
Talaabada 2: Split FLV in qeybaha
Si aad u kala qaybsan tahay FLV video ku daray in liiska, xaq u riix si aad u furato menu ah ka dooro "Edit" doorasho. Tani waxay keeni doonaa suuqa kala splitter FLV sida hoos. Waxaad inta badan jiidi doonaa labada sliders hoos bar prograss ah in qaybaha: "Calan bilaabi dhibic" iyo "Calan dhibic dhamaadka". Inta ay qayb ka ayaa lagu wadaa, guji "clip New" (maqas ah) badhanka si ay u wareemay saxaarad. Ugu dambeyntii guji "OK" si loo badbaadiyo clip ku saxaarad in la beddelo tallaabada xigta.
Tallaabo 3: Ka billow files FLV qaybsama
Waxaad u baahan doontaa in aad doorato qaab loo badbaadiyo kala videos FLV. Waxaad sidoo kale kala FLV in files FLV badan, ama wax kasta oo ah qaabab kale ayaa laga yaabaa ku jira Video Converter. Si aad u dooratid foramt wax soo saarka ah, kaliya ka dhacay image Qaabka dhinaca midig ka dibna dooro waxa aad rabtid halkan. Ugu dambeyntii guji "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan qaybsama files FLV iyo diinta qaab loo doortay.
FLV Splitter u Mac
Qalab qaybsama ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa in splitter FLV ee Mac, laakiin waxa ay u shaqaysaa wax yar ka duwan version Windows. Waxaad u baahan tahay in aad ku darto tus ka FLV u daaqadaha hoose iyo mid kasta oo aan kala tagno siday u kala horreeyaan. Ugu dambeyntii, jar files FLV hal mar.
Sida loo Play AVI on iPhone 5s
Sidee Baan dejinta File MOV An (Quicktime) si Adobe jilitaankii?